အိမ်ရှင်မ(အလုပ်အကိုင် မှီခို) … ဆားနှင့် တူသော မိန်းမ – Nyi Ma Lay
အိမ်ရှင်မ(အလုပ်အကိုင် မှီခို) … ဆားနှင့် တူသော မိန်းမ
ခင်ဗျား ဘာအလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝ မ်းကျောင်းပါသလဲ…… ကျွန်တော် ဘဏ်စာရေး တစ်ယောက်ပါ ခင်ဗျား မိန်းမရော? သူ အလုပ်အကိုင်မရှိပါဘူး။ သူက အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ပါ
အိမ်မှာ မနက္စာကို ဘယ်သူလုပ်ပါသလဲ..? … မိန်းမလုပ်ပါတယ် သူ အလုပ်အကိုင်မရှိတော့ သူလုပ်ပါတယ် ခင်ဗျား မိန်းမဘ ယ်အချိန်လော က်ထပြီး မနက်စာပြင်ဆ င်တတ်သလဲ ? … မနက် ၆နာရီလောက်ပါ ဧည့်ခန်းတွေ သန့်ရှင်းရေးလု ပ်ပြီးမှ သူမနက်စာ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်
ဆရာဝန် … ခင်ဗျား ကလေးတွေ ဘယ်လိုကျောင်းသွား သလဲ ? … ကျွန်တော့်မိန်းမ သွားပို့ပါတယ် သူက အလုပ်အကိုင်မရှိတော့ သူပဲ ပို့ပါတယ် ဆရာဝန် …. ကလေးေ ကျာင်းပို့ပြီးနောက် သူ ဘာလုပ်သလဲ ? … စျေးသွားပါတယ် စျေးဝယ်ပြန်ပြီး ထမင်းဟင်းချက် အဝတ်လျှော်ပါ တယ် သူက အလုပ် အကိုင်မရှိဘူးလေ
ဆရာဝန် … ည အလုပ်ဆင်း လို့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ခင်ဗျားဘာလု ပ်သလဲ..? …အိ မ်ပြန်ရောက်ရင် ကျွန်တော်နားပါတယ် တစ်နေကုန် ပင်ပန်းထား တာကိုးဗျာ
ဆရာဝန် … အဲဒီအချိန်မှာ ခင်ဗျားမိန်းမ ဘာလုပ်နေလဲ ? …
တစ်အိမ်သားလုံး ညစာစား ဖို့အတွက် သူပြင်ဆင်နေပါတယ် ကလေးတွေကို ထမင်းေ ကျွးတယ် ပြီးရင် အိုးခွက်ပန်းက န်ဆေးတယ် မီးဖိုဆောင်သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ကလေးတွေ အိမ္စာလုပ္တာကို စောင့်ကြည့် တယ် ပြီးရင် ကလေးတွေအိပ်ဖို့ သိပ်ပါတယ်
ဒါဟာ အိမ်ရှင်မ(အလုပ်အကိုင် မှီခို) ဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယော က်ရဲ့တစ်နေ့တာအလုပ်ပါ ဒါကို အလုပ်အကိုင်မရှိဘူး (မှီခို) လို့ ပြောရက်သလား…!!😞
ကျွန်မရဲ့ အလုပ်က တစ်နေ့ ၂၄ နာရီ တစ်ပတ်7ရက်ဖြစ်ပြီး ပိတ်ရက်မရှိပါ ကျွန်မက မိခင်တစ်ဦးဆိုလည်း ဟုတ်တယ်
ကျွန်မက ဇနီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ် ကျွန်မက သမီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ် ကျွန်မက ချွေးမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ် ကျွန်မက နှိုးစက် နာရီဆိုလည်း ဟုတ်တယ်
ကျွန်မက စားဖိုးမှူးတစ်ယောက်ဆိုလည်း ဟုတ်တယ် ကျွန်မက အခိုင်းအစေတစ်ယောက်ဆိုလည်း ဟုတ်တယ် ကျွန်မက ကလေးထိန်းလည်းဟုတ်တယ် ကျွန်မက ဆရာမလည်းဖြစ်တယ် ကျွန်မက သူနာပြုဆိုလည်း ဟုတ်တယ်
ကျွန်မက Sexual partner ဆိုလည်း ဟုတ်တယ် ကျွန်မက အိမ်စောင့်လည်း ဟုတ်တယ် ကျွန်မက တောက်တိုမယ်ရလည်း ဟုတ်တယ် ကျွန်မက အကြံပေးလည်း ဟုတ်တယ်
ကျွန်မမှာ နားရက်တွေ ခွင့်တင်တာတွေမရှိပါဘူး ကျွန်မမှာ နှစ်တစ်နှစ်ပိတ်ရက်တွေဆိုတာမရှိပါဘူး ကျွန်မ အလုပ္က နေ့ရယ် ညရယ်လို့ခွဲလို့မရပါဘူး
အဲဒီအတွက်ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်က 😑😑 “နေ့တိုင်း အိမ်မှာနေပြီး ဘာလုပ်နေသလည်း” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကြီးဖြစ်နေတယ်
🙋 မိန်းမဆိုတာ ထမင်းစား စားပွဲပေါ်ကဆား နဲ့တူတယ် သူ့အရေး ပါမှုကိုလူတွေသိပ် ဂရုမစိုက်မိကြပါဘူး ဒါပေမယ့်သူလျော့ေ နရင် အစားအစာေ တွကအရသာမဲ့ သွားတတ်သလိုပါပဲနော်
သင့်ဘေးက မိခင် မိန်းမ ချွေးမ သမီး အစ္မတွေကိုကျေးဇူးတင်စ ကားတစ် ခွန်းလောက် ပြောပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ရှင် #Credit-NineNineSaNay
ခင္ဗ်ား ဘာအလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးဝ မ္းေက်ာင္းပါသလဲ…… ကၽြန္ေတာ္ ဘဏ္စာေရး တစ္ေယာက္ပါ ခင္ဗ်ား မိန္းမေရာ? သူ အလုပ္အကိုင္မရွိပါဘူး။ သူက အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္ပါ
အိမ္မွာ မနကၥာကို ဘယ္သူလုပ္ပါသလဲ..? … မိန္းမလုပ္ပါတယ္ သူ အလုပ္အကိုင္မရွိေတာ့ သူလုပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား မိန္းမဘ ယ္အခ်ိန္ေလာ က္ထၿပီး မနက္စာျပင္ဆ င္တတ္သလဲ ? … မနက္ ၆နာရီေလာက္ပါ ဧည့္ခန္းေတြ သန႔္ရွင္းေရးလု ပ္ၿပီးမွ သူမနက္စာ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္
ဆရာဝန္ … ခင္ဗ်ား ကေလးေတြ ဘယ္လိုေက်ာင္းသြား သလဲ ? … ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ သြားပို႔ပါတယ္ သူက အလုပ္အကိုင္မရွိေတာ့ သူပဲ ပို႔ပါတယ္ ဆရာဝန္ …. ကေလးေ က်ာင္းပို႔ၿပီးေနာက္ သူ ဘာလုပ္သလဲ ? … ေစ်းသြားပါတယ္ ေစ်းဝယ္ျပန္ၿပီး ထမင္းဟင္းခ်က္ အဝတ္ေလၽွာ္ပါ တယ္ သူက အလုပ္ အကိုင္မရွိဘူးေလ
ဆရာဝန္ … ည အလုပ္ဆင္း လို႔ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ ခင္ဗ်ားဘာလု ပ္သလဲ..? …အိ မ္ျပန္ေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္နားပါတယ္ တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္းထား တာကိုးဗ်ာ
ဆရာဝန္ … အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားမိန္းမ ဘာလုပ္ေနလဲ ? …
တစ္အိမ္သားလုံး ညစာစား ဖို႔အတြက္ သူျပင္ဆင္ေနပါတယ္ ကေလးေတြကို ထမင္းေ ကၽြးတယ္ ၿပီးရင္ အိုးခြက္ပန္းက န္ေဆးတယ္ မီးဖိုေဆာင္သန႔္ ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ကေလးေတြ အိမၥာလုပၲာကို ေစာင့္ၾကည့္ တယ္ ၿပီးရင္ ကေလးေတြအိပ္ဖို႔ သိပ္ပါတယ္
ဒါဟာ အိမ္ရွင္မ(အလုပ္အကိုင္ မွီခို) ဆိုတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာ က္ရဲ့တစ္ေန႔တာအလုပ္ပါ ဒါကို အလုပ္အကိုင္မရွိဘူး (မွီခို) လို႔ ေျပာရက္သလား…!!😞
ကၽြန္မရဲ့ အလုပ္က တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ တစ္ပတ္7ရက္ျဖစ္ၿပီး ပိတ္ရက္မရွိပါ ကၽြန္မက မိခင္တစ္ဦးဆိုလည္း ဟုတ္တယ္
ကၽြန္မက ဇနီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္တယ္ ကၽြန္မက သမီးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္ ကၽြန္မက ေခၽြးမတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္ ကၽြန္မက ႏွိုးစက္ နာရီဆိုလည္း ဟုတ္တယ္
ကၽြန္မက စားဖိုးမႉးတစ္ေယာက္ဆိုလည္း ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မက အခိုင္းအေစတစ္ေယာက္ဆိုလည္း ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မက ကေလးထိန္းလည္းဟုတ္တယ္ ကၽြန္မက ဆရာမလည္းျဖစ္တယ္ ကၽြန္မက သူနာျပဳဆိုလည္း ဟုတ္တယ္
ကၽြန္မက Sexual partner ဆိုလည္း ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မက အိမ္ေစာင့္လည္း ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မက ေတာက္တိုမယ္ရလည္း ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မက အႀကံေပးလည္း ဟုတ္တယ္
ကၽြန္မမွာ နားရက္ေတြ ခြင့္တင္တာေတြမရွိပါဘူး ကၽြန္မမွာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပိတ္ရက္ေတြဆိုတာမရွိပါဘူး ကၽြန္မ အလုပၠ ေန႔ရယ္ ညရယ္လို႔ခြဲလို႔မရပါဘူး
အဲဒီအတြက္ရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္က 😑😑 “ေန႔တိုင္း အိမ္မွာေနၿပီး ဘာလုပ္ေနသလည္း” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္
🙋 မိန္းမဆိုတာ ထမင္းစား စားပြဲေပၚကဆား နဲ႔တူတယ္ သူ႔အေရး ပါမႈကိုလူေတြသိပ္ ဂ႐ုမစိုက္မိၾကပါဘူး ဒါေပမယ့္သူေလ်ာ့ေ နရင္ အစားအစာေ တြကအရသာမဲ့ သြားတတ္သလိုပါပဲေနာ္
သင့္ေဘးက မိခင္ မိန္းမ ေခၽြးမ သမီး အစၼေတြကိုေက်းဇူးတင္စ ကားတစ္ ခြန္းေလာက္ ေျပာေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ရွင္ #Credit-NineNineSaNay
Previous post မင်္ဂလာဆောင်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ အဝှာကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု့(ရုပ်သံ)
Next post လူတွေ သိပ်မသိကြတဲ့ အုန်းဆီ အလွန်အကျွံသုံးခြင်း ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးများ